Nbudata Mega Pack ọpọlọpọ maka ikuku nke Airbus A300 FSX & P3D - Freeware
Ihe ngwugwu a nwere ụdị 14 nke Airbus A300-XXX (-600R, 600F, ST, B1, B2, B4) na ndụ 31 edepụtara na tebụl dị n'okpuru. Ihe okike obula nwere 2d panel ya na akpukpo ukwu nke nwere udiri omenala dika: General Electric CF6-80C2, CF6-50C2 na Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 (nke dochie JT9D-59A adịghị). Denye echiche ndi mmadu nke 27 emebere n'ime ugbo elu dum. Kwere m, afọ ga-eju gị n'inwe ya. Ihe dị mkpa: gbaa mbọ gụọ akwụkwọ ntuziaka iji mara maka ọrụ ụgbọelu ndị a FSX or P3D.
+ Gbasie / United ngwugwu Services + American Airlines
+ Qatar Airways - Old agba
+ Mahan Air (2 liveries) + House na agba + Rollout agba
+ Trans European Airways - tii + Lufthansa
+ Scandinavian Airlines - Old agba
-Agụnye na Airbus Zero G !!!
downloads 100 118
kere 22 Oct 2013
Thomas Ruth & otu ya / rụkọrọ ọrụ, na-ada site Mike Maarse, repack site Luis Quintero